HomeWararka MaantaOscar Oo Cusbitaalka Loola Carraray Kadib Isku Dhicii Ospina
Kooxda Chelsea ayay qasab ku noqotay inay bedel ku samayso Oscar intii ay socotay ciyaartii derbiga ahayd ee ay Arsenal la ciyaarayeen, kadib markii kubad sameeyaha khadka dhexe ay la soo daristay xaalad loo malaynayo “Maskax guur’ qaybtii hore ee ciyaarta.
Xidiga reer Brazil ayaa sida kubada ay isaga soo go’een goolwadaha Arsenal ee David Ospina oo uu kubada kor mariyey ciyaartan ka dhacaysay garoonka Emirates Stadium, waxaana loo diray cusbitaalka si baadhis loogu sameeyo.
Isku dhacan ayaa u muuqday mid uu khaladka lahaa goolwadaha kooxda Gunners oo si uu goolka u badbaadiyo ugu soo baxay ciyaaryahanka oo diilinta ganaaxa ku dhex jira, laakiin garsoore Michael Oliver ayaan Chelsea ku abaal marin waxba isla markaana ciyaarta fasaxay oo inay sii socoto amray.
Didier Drogba ayaa lagu soo bedelay halkii Oscar qaybtii dambe bilowgeedii, iyadoo uu telefishanka ciyaaraha ee Sky Sports daboolka ka qaaday in Jose Mourinho u xaqiijiyey iyaga inuu jiro go;aanka ciyaaryahanka dhakhtarka loogula carraray kadib markii laga shakiyey inuu maskax guur ku dhacay.
Faaqideyaasha ciyaaraha ee Sky sports ee kala ah Jamie Carragher, Graeme Souness iyo Thierry Henry ayaa dhamaantood isku raacay in kubadaasi rigoodhe cadaan ah ahayd.
15/10/2017 Abdiwahab Ahmed